सिटिजन्स बैंकमा सुनको का'ण्डै का'ण्ड, कसैको कारावास, कसैको मृ'त्यु ! - Sidha News
सिटिजन्स बैंकमा सुनको का’ण्डै का’ण्ड, कसैको कारावास, कसैको मृ’त्यु !
काठमाडौं । एकपछि अर्काे सुनका’ण्ड हुन थालेपछि सिटिजन्स बैंक मुलुककै सर्वाधिक असुरक्षित बैंक बनेको छ । सिटिजन्समा कारोबार गर्ने हजारौं सेवाग्राही सशंकित देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसप्रति चासो देखाएको छ।
चार वर्षअघि २०७२ भदौ १५ गते २ करोड २८ लाख ३८ हजार ४ सय १ रुपैयाँबराबरको साढे २ किलो सुन सिटिजन्सको न्युरोड शाखाबाट गायव भयो । सर्वसाधारणले धितो राखेको सुन हराएको तीन वर्षसम्म बैंकले घटनालाई गुपचुपमै राख्यो । सुन जाँचकीका रूपमा कार्यरत सामिन शाक्यलाई आरोप लगाउँदै सिटिजन्सका कर्मचारीले न्यूरोडको घरसम्म हडपेको सामिनका बुवा न्हुच्छेराज शाक्य बताउँछन् ।
घर ह’ड्पेपछि सामिनले शान्तिसँग बस्न पाइनन् । उनी आफैं ‘मलाई थुनिदिनुपर्यो ’ भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा जान बाध्य भइन् । आफूवि’रुद्ध आफैं उजुरी लिएर ब्युरोमा पुगेपछि साढे दुई किलो सुन हराएको घटना बाहिरिएको थियो । त्यसपछि मात्र २०७५ भदौ १० गते बैंकका तत्कालीन कानुन शाखा प्रमुख केदार अधिकारीले सीआईबीमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । सामिन कारावासमा छिन् । बैंकभित्रका तस्करका कारण उनले लगभग सर्वस्व गुमाएकी छन् ।
त्यही मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला नेपालगन्ज शाखामा अर्काे सुनका’ण्ड मच्चिएको छ । जसको परिणाम त्यहाँ कार्यरत शाखा प्रबन्धक विवेक स्वाँरको ज्यान गएको छ । स्वाँरलाई पनि नक्कली सुन धितो राखेर कर्जा प्रवाह गरेको आरोप लागेको थियो । केन्द्रीय कार्यालयकै सहमतिमा उनले कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।
कर्जाका लागि धितो राखिएको सुन केन्द्रीय कार्यालय दरबारमार्गमा जाँच पनि गरिएको थियो । तर नक्कली भएको पाइएको छ । नक्कली सुन राखेर धितो कर्जा दिएको भन्दै केन्द्रीय कार्यालयले उनलाई दबाबमा राख्दै आएको थियो । त्यसपछि तनावमा पुगेका स्वाँरको हृदयघा’तका कारण भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगन्जमा नि’धन भएको हो ।
नक्कली सुन धितो राखेको अभियोग लागेका उनी ८ साउनमा २५ लाख धरौटी तिरेर रिहा भएका थिए । त्यसपछि उनी तनावमा रहँदै आएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । (येस काठमाडौ)